SAVOROVORO TANY NOSY-BE : Vazaha roa lahy voarohirohy ho mpaka taova nodoran’ny olona velona
Nanoloana ny savorovoro izay nitranga tao Nosy-Be nanomboka ny alarobia lasa teo iny dia fantatra izao fa tafakatra dimy ny isan’ireo olona namoy ny ainy vokatry ny fifandonana nisy teo amin’ireo vahoaka sy ny mpitandro filaminana tany an-toerana. 3 octobre 2013
Ankoatra izay dia mbola nisy fiara may, toeram-pivarotana voaroba.
Raha tsiahivina fohy dia fototra niandohan’ny olana tamin’izany, araka ny loharanom-baovao, dia fahatratrarana lehilahy iray tratra izay voalaza fa nangala-jaza. Rehefa nahare izay ireo mponina tao an-toerana dia nihorotra ary nitaky ny hanao fitsaram-bahoaka kanefa tsy nanaiky izany ireo mpitandro filaminana. Teo no raikitra ny tora-bato niaraka tamin’ny fandorona sy fanimban-javatra maro samihafa.
Fatin-jaza teo amoron-dranomasina
Araka ny fampitam-baovao voaray hatrany dia hita faty teo amoron-dranomasina tao Ambatoloaka ihany ilay zaza nisy nangalatra, ka fototry ny korontana rehetra.
Tamin’ny fomba feno habibiana no namoana ilay tsy manan-tsiny ka izay no tena nampiempo ireto vahoaka ireto. Nihoron-koditra ireo nanatri-maso izany satria niala avokoa ny hodi-dohany, ny lelany sy ny masony ary tsy hita teo intsony ihany koa ny taovam-pananahany.
Raha ny zava-misy tany an-toerana, omaly maraina dia niitatra ny raharaha. Voalazan’ny loharanom-baovao mantsy fa nisy teratany vahiny roa lahy Italianina sy Frantsay no voatondro no naka ilay zazalahy valo taona, ka dia io no nampiempo ny hatezeram-bahoaka. Nodoran’ny olona velona teo amin’ny tora-pasika Ambatolaoka ireto vazaha ireto. Raha ny loharanom-baovao voaray ihany dia nikasa ny hanazava ny tena zava-misy marina tamin’ireo olona ireto vahiny ireto saingy tsy mbola tapitra akory izany, dia efa nisy ny nidaroka azy ireo avy hatrany, ka niafara tamin’ny fandorana azy ireo velona izany.
Nandray andraikitra ny manam-pahefana
Raha ny zava-niseho tamin’io alarobia io dia nisy ny tora-bato sy ny fanimban-javatra isan-karazany ka voatery niditra an-tsehatra ireo mpitandro filaminana nanao ny fandaminana. Nisy maromaro no naratra tamin’izany. Ny roa tamin’ireo kosa no fantatra fa namoy ny ainy teny amin’ny hopitaly.
Manoloana ireo fatiolona maromaro ireo dia naneho ny heviny tao amin’ny birao fiasany ao Antranobozaka ny Kaomandà ny CIRGN atyAntsiranana, ny kolonely Randriamanarina Chritophe, notronin’ireo lehiben’ny mpitandro filaminana aty an-toerana izay nahitana ny Commandant de region militaire N° 7, kolonely Marcelin Henri Michel ary ny Talen’ny Polisy aty amin’ny Faritany Antsiranana, ny jeneraly François.
Nandritra ity tafa tamin’ny mpanao gazety ity dia nanentana sady nanaitra ny sain’ny vahoaka ny kolonely RandriamanrinaChristophe, mba ho tony ary tsy ao Nosy-Be ihany no notsindriany tamin’izany fa hatraty Antsiranana. Ankoatra izay dia nambarany ihany koa ny ahiahiny « amin’ny mety ho fisian’ny ambadika politika amin’izao raharaha izao ka tokony hilamina ny vahoaka fa tsy tokony hanaiky hatao fitaovana ». Nampatsiahiviny hatrany fa « tany tan-dalàna i Madagasikara, na dia eo aza ny fanakiviana misy fa tsy finaritra ny hanapotika ny fananam-bahoaka na koa fananam-panjakana ».
Mangina tanteraka i Nosy-Be
Fantatra fa ny hiaro ny fananam-bahoaka ny mpitandro filamina fa tsy sanatria mpiray petsapetsa amin’ny ratsy, ka noho izany dia anjaran’ny mpitandro filaminana ny mandray an-tanana sady mandray anjara raha ohatra ka misy olo ratsy. Tsy mbola tafiditra anatin’ny lalàna velona eto amintsika ny fitsaram-bahoaka ary tsy mety ihany koa izany hoe mandoro olona velona izany. Ka noho izany dia nandray andraikitra ny mpitandro filaminana, efa nampitandrina ihany koa nefa entin’ny fô mafana ny vahoaka toa tsy maheno na miverin-dalana. « Raha ny tokony ho izy tokony mandalo fanadihadihana ny olona izay heverina fa nanao ratsy ary ampandalovina eo anivon’ny Fitsarana. Aorian’izany no ahafantarana ny sazy sahaza azy », hoy hatrany ny fanazavana noentiny.
Tetsy andanin’izay dia nampitandrina ihany koa ny Talen’ny Polisy fa anjaran’ny mpitandro filaminana ny manatanteraka ny asa. Nampatsiahy izay trangan-draha tagny Ambilobe ity farany sady niresaka izao tranga miseho ao Nosy-Be amin’izao fotoana. Notsindriany mafy fa « tokony havela manao ny asany ny mpitandro filaminana sy ny manam-pahefana. Ny Fitsara-bahoaka dia mifanohitra tanteraka amin’ny asan’ny mpitandro filaminana ». Araka ny loharanom-baovao voaray dia fantatra fa efa nidina ifotony nijery ny zava-misy marina tany Nosy-Be ny Lehiben’ny Faritra Bezara Romuald. Foto-diany tamin’izany ny fikaroham-bahaolana mahakasika ity savorovoaro misy ao an-toerana ity ary nandritra izany dia niantso ny vahoaka ny tenany mba ho tony hatrany.
Manoloana ity tranga tao Nosy Be ity, izay nisy fanimbana ny fananam-bahoaka ity dia hisokatra ny fanadihadiana mahakasika izany ary hiafara amin’ny fanasaziana raha misy ilaina izany. Araka izany dia tsy nitazam-potsiny ireo lehibena mpitandro filaminana niaraka amin’ny mpitondra fanjakana ao an-toeragna fa nandefa Miaramila, Zandary ary ny Polisy avy Antsiranana nanatevin-daharana ireo namany any Nosy-Be.
Omaly kosa dia nangingina ny tanànan’i Nosy-Be. Tsy misy sahy mivoaka ny trano avokoa ny olona, noho ny fanahiana amin’izay mety ho tohin’ity raharaha ity.
Nangonin’i Ndn sy Avotra isaorana
SAVOROVORO TANY NOSY-BE
2013-10-03 20:59:08 par JAOMARENGA
Mahazo vahana loatra ny kolikoly eto amintsika ary tsapa amin’ny endriny maro izany ka miainga avy amin’ireo mpitondra ambony, ireo manampahefana, ireo mpitandro filaminana, ireo vahiny, ireo mahalala olona ambony, ka ny vahoaka madinika foana no ianjadin’izany rehetra izany.
Tst mahalala ny momba ilay DG n’ny BIANCO aho fa raha ireny fanambarana asehony amin’ny haino aman-jery ireny dia midika amiko fa te-hiasa izy sy ny ekipany fa ny fanjakana sy ny olom-boatendriny no tena olana amin’ny fampiharana ny ady atao amin’izany.
KA IZA ARY NO AZO AMETRAHANA TOKY AMIN’IREO TOMPONANDRAIKITRA ISANTSOKAJINY ?
OVIANA ARY ISIKA ZANAKA MALAGASY MBA HIFOHA KA HAMPANJAKA NY IREO ZAVATRA NIANARANTSIKA TANY AMIN’NY ECOLE NATIONALE SNS......
IRETO NO MBA TENY AVOAKAKO MOMBA NY VAHOAKA :
malahelo, mitomany, very Hasina, tsy manan-toky, tsy manan-tsafidy, rebirebena, verezin-jo tanteraka hany ka na ireo vahiny aza manao izay tiany hatao eto.
Angamba efa maro koa ireo vazaha nahazo ny "zom-pirenena malagasy" izay tsy misy "fondement" fa de vita ho azy.
Nefa tadidio ry malagasy fa na ianao io aza anie tsy manan-danja mihoatra ny "kiva" na chien" any andafy any ê ka na ny sezam-bahoaka na "banquette publique" ireny aza androahan’ny vazaha anao fa aleony ny "kiva" no omeny seza. Aty amintsika aty anefa izy ireo toa efa te-ho tompon’ny fahefana. Midika izany fa rehefa miaka-bidy ny "devise" dia lafo tsikelikely i Madagasikara.
MAMPAHERY NY VAHOAKAN’I NOSIBE NY TENAKO MBA HO FANANARANA HOA AN’NY FITONDRANA TETEZAMIHITATRA.
OMEO NY ANJARANY AMIN’IZAY NY VAHOAKA FA AZA MIANDRY FARANY IANAREO FA RAVA HOA AZY IZAO KAJIKAJINAREO IZAO.
2013-10-04 10:36:12 par rené
Mahagaga mihitsy ny fiverimberenany fitsaram-bahoaka ity.
Raha ny amiko manokana taratra ny kolikoly be loatra
amin’ ny fitsarana sy ny isan’ ambaratonga no mahatonga io
Heritreroto manome 300Euro foana ireo vazaha ireo fa hafaka
mody antsokosoko any aminy.
Ka noho izany, mila mba fanaraha maso hentitra ireo vazaha
miditra aty Madagasikara fa tsy tenenina foana hoe : touriste
de hampidi-bola ho any vahoaka sy fanjakana.
TSY MILA VAZAHA TSY MANJARY NY VAHOAKA MALAGASY FA OLONA HANAO INVENSTISSEMENT ETO HAMPIASA VOLA, HITERAKA ASA.
ALAKAMISY 18 NOVAMBRA - ALAROBIA 24 NOVAMBRA 2021 (0) 24 novembre 2021 Iharan’ny ramatahora ny havan’ilay lasibatra, mitaraina amin’ny Fitondram-panjakana ZAZAVAVIKELY VOAOLANA TAO AMBATONDRAZAKA (0) 24 novembre 2021 Nizaha ifotony ireo kaominina saro-dalana ny Governora FARITRA ATSINANANA (0) 24 novembre 2021 Efa very fitokisana i Ravalomanana, Rajaonarimampianina ary Roland Ratsiraka POLITIKA (0) 24 novembre 2021 Noraisin’ny Filoha Rajoelina teny Iavoloha ny masoivohon’i Japon FIARAHA-MIASA AMIN’NY ANY IVELANY (0) 24 novembre 2021